सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरी राजनीतिक बन्दी भएको जिकिर - bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरी राजनीतिक बन्दी भएको जिकिर
३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:५२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरी राजनीतिक बन्दी भएको जिकिर गरेका छन् । आइतबार संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले रेशम चौधरीको मुद्दा थरुहट आन्दोलनको एउटा पाटो भएको भन्दै यो मुद्दालाई राजनीतिक घटनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘माननीय रेशम चौधरी थरुहट विद्रोहकै एउटा बन्दी हुन्, यसमा किन्तु परन्तु छैन । हामीले यसमा कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ । झापा आन्दोलन, टिमुरबोटे र ओखलढुङ्गा काण्ड, जनयुद्धका समस्याहरू हल गर्‍यौँ भने टिकापुर थारु विद्रोहको हल किन गर्न नसक्ने ? त्यसकारण त्यहाँ पनि हल निकाल्न सकिन्छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ । त्यसैले त्यसलाई हल गरौं ।’
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:५२
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स ३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:५२
लघुकथा–पढ्ने रहर ३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:५२
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल ३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:५२
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला ३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:५२